'Inyaniso Vigilante' ngokubhekiselele kumhleli we-New York Times weentlanga
Ingaba ngumnyatheli umsebenzi ukuba abe nenjongo okanye athethe inyaniso, nokuba ngaba kuthetha ukuchasana namazwi ngamagosa karhulumente kwiindaba eziendaba?
Yiloo mpikiswano uMongameli we-New York Times umhleli we-Arthur Brisbane ukhubekile ngokutsha xa ephakamisa loo mbuzo kwikholam yakhe. Kwisiqendu esicacisiwe esithi "Ngaba ii-Times kufuneka zibe yiQiniso leVigilante?", UBrisbane uthi isigqibha sexesha lexesha uPaul Krugman "ngokucacileyo unenkululeko yokubiza oko akucinga ukuba buxoki." Emva koko wabuza, "ngaba intatheli zeendaba kufuneka zenze okufanayo?"
I-Brisbane yayingabonakali ukuba iyayiqonda loo mbuzo uhlolwe kwii-newsroom kwithuba elithile ngoku kwaye enye ibangela ukuba abafundi basuke bekhatywe yindalo "yongqongileyo" eyinika amabini omabili amabali kodwa akayi kubonakalisa inyaniso.
Njengomfundi omnye wexesha lexesha wathi:
"Inyaniso yokuba uya kubuza into into engathethiyo ibonisa ngokucacileyo ukuba ubude kangakanani.
"Ukuba amaxesha angeke abe yinyaniso yeqiniso, ngokuqinisekileyo andifuni ukuba ngumthengisi wexesha."
Kwakungekhona nje ngabafundi ababengacasuliyo. Uninzi lweziganeko zeendaba zentengiso kunye neentloko zathetha nazo. Njengoko uprofesa we-NYU u-Jay Rosen wabhala:
"Ukuthetha inyaniso kuthatha njani isihlalo sokubuya kwi-shishini elibi kakhulu lokubika iindaba? Oku kuthetha ukuba oogqirha abasemagqabini abangeke 'basindise ubomi' okanye 'impilo yesigulane' ngaphambi kokufumana intlawulo kwiinkampani zomshuwalense. uxoka ulwaphulo olupheleleyo. Lonakalise ukugqithwa kweendaba njengentlalo karhulumente kunye nodumo oluhloniphekileyo. "
Ngaba amaThankathi kufuneka abize iziphathamandla xa zenza iingxelo zobuxoki?
Ukubhenca eceleni, masibuyele kumbuzo wokuqala waseBrisbane: Ngaba ngaba intatheli zibiza abantu ngamagosa eendaba xa benza iingxelo zobuxoki?
Impendulo nguyebo. Injongo ephambili yentatheli ihlala ifumana inyaniso, nokuba oko kuthetha ukubuza imibuzo kunye nenselele ngunyuli, irhuluneli okanye umongameli.
Ingxaki kukuba, akusoloko kulula. Ngokungafani nabalobi be-op-ed njengo-Krugman, abapheli-ndaba beendaba abasebenzayo kwixesha elimisiweyo abanalo ixesha elaneleyo lokujonga zonke iinkcazo igosa elenzayo, ngokukodwa xa kubandakanya umbuzo ongaphendululwanga ngokulula ngokukhawuleza kwe-Google.
Ngokomzekelo, masithi uJoe Wezombusazwe unikela intetho ebango ukuba isigwebo sokufa sele sisilumkiso esiphezulu ngokubulala. Nangona kuyi nyaniso ukuba amazinga okubulala abantu asele kwiminyaka yamuva, ngaba loo nto ibonisa ubungqina beJoe? Ubungqina bolu ngxaki buyinkimbinkimbi kwaye kaninzi aluhambelani.
Kukhona olunye umba: Ezinye iingxelo zibandakanya imibuzo ebanzi yefilosofi enzima xa kungenakwenzeka ukulungisa enye indlela okanye enye. Masithi uJoe Wezopolitiko, emva kokudumisa isigwebo sokufa njengento engavimbela ubugebengu, uyaqhubeka ebiza ukuba yinto efanelekileyo yokuziphatha.
Ngoku, abaninzi abantu bayakuvuma ngokuvumelana noJoe, yaye baninzi abavumelaniyo. Kodwa ngubani na? Ngumbuzo wefilosofi abaye balwa neminyaka emininzi ukuba kungengangeenkulungwane, enye engenakuyicombulula ngumnyathelisi okhupha ibali leendaba ezi-700 ngomzuzu wokugqibela we-30.
Ewe, intatheli zimele zenze yonke imizamo ukuqinisekisa iinkcazo ezenziwe ngabapolitiki okanye ngamagosa karhulumente.
Kwaye, ngokwenene, ukutshitshiswa kolu hlobo kulugqityiweyo olu hlobo lokuqinisekisa, ngendlela yewebsite njengePolitifact. Enyanisweni, umhleli weNew York Times uJill Abramson, ekuphenduleni kwakhe kwikholamu yaseBrisbane, uchaze iindlela ezininzi iphepha elihlola ezo ziqinisekiso.
Kodwa uAbramson waphinde waqonda ubunzima bokufuna inyaniso xa ebhala:
"Ngokuqinisekileyo, ezinye iimbali ziyimpikiswano, kwaye ezininzi iinkcazo, ikakhulukazi kwibala lezopolitiko, zivulekele ukuphikisana. ukukhalela 'iinyaniso' zifuna kuphela ukuva iinguqu zabo. "
Ngamanye amagama, abanye abafundi baya kubona kuphela inyaniso abafuna ukuyibona , kungakhathaliseki ukuba kuthethwa ngenyameko kwintatheli. Kodwa oko akuyonto intatheli inokuyenza kakhulu.
Indlela yokusebenzisa iSibonelelo ngokuchanekileyo njengoReporter
Kuthatha ixesha elide ukuthatha indlela yokuziphatha?
Yintoni Uhlalutyo Lokwenene?
Ukugqithisa ngakumbi Imithi Yakho Kungabakhomaza
Imbali yeLake Lake yaseTchaikovsky
Iimbopheleleko zee Queens, i-Drones kunye noBasebenzi beeNyosi
Indlela yokudibanisa kunye nokuCwangcisa iDatabase ye-Access 2007
Ngaba Ungadla inyama Ngomhla weThathu kunye neLwesihlanu seLente?
Ziyintoni IsiCwangciso SokuHlola?
5 Iimbono eziKhulu zoBathandi beCar